Okpu ịwụ, Okpu Ugwu, Okpu okpu, Miltary Hat - Surmount
Anyị nwere ndị otu ọkachamara ọkachamara na ndị otu ndị ahịa na-ahụ maka azụmahịa na mba ofesi.
Nchedo Can Pụrụ Trusttụkwasị Obi
Shandong Surmount Hats Co., Ltd. nke e guzobere na 2005 ma dị na Rizhao City, obodo mara mma nke dị n'ụsọ oké osimiri na Shandong Province, China. Dị ka ọ dị nso na ọdụ ụgbọ mmiri Qingdao na ọdụ ụgbọ mmiri Rizhao, njem na-adaba adaba. Companylọ ọrụ anyị nwere ihe dịka 300workers nke na-ekpuchi mpaghara karịa 13,000 square mita ， na aha ndebanye aha nke 10 nde na ihe ndị dị adị karịa 20 nde. Anyị ụlọ ọrụ nwere oge a noo, inyeaka ụlọ ọrụ, elu mmepụta ngwá na ọgaranya oru ike.
30 okpu kachasị mma maka ụdị niile, oge na mmefu ego na 2021
Ahụike ụmụ nwanyị nwere ike rụpụta ọrụ site na njikọ dị na ibe a, mana anyị na-egosipụta ngwaahịa anyị kwenyere na ya. Gini mere anyị ji tụkwasị anyị obi? Abịa n’ihe gbasara ejiji, okpu ịwụ na-abịa dị ka ifufe. Site na okpu akara ịwụ nke Britney Spears na 90s ka ọ dabara adaba dị ka onyinye gimmick na ...
Akpa okpu bụ Àgwà
Aringgba okpu bụ àgwà Na ụzọ Margaret Howell Spring / Summer 2020, anyị hụrụ uwe ogologo ọkpa, lemon buru ibu na uwe elu turquoise, ogige ntụrụndụ dị larịị, na uwe ndị ọkpọ. Ma eleghị anya, ọ bụ ọnọdụ ahụ, mana sọks n'elu uwe ogologo ọkpa adịghị njọ, ọtụtụ n'ime ha ...